I-Sauce yeTatato kunye ne-Italian Herbs Recipe
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Iziqholo kunye neziqholo Garlic
I-tomato sauce kunye nemifuno yase-Italy
I-tomato sauce Ukupheka kwanamhlanje, kukho inani elikhulu lezitsha, ukongeza apho i-tomato sauce igqibelele, ingaba i-shish kebab, inkukhu ethosiweyo okanye i-pasta. Kukho nawaphi na ikhitshini ehlabathini kukho iresiphi ekhethekileyo yokupheka i-tomato sauce - i-spicy, i-spicy, i-aromatic ... Ndifuna ukunikela inguqu ebusika ye-tomato sauce kunye nemifuno yokutya yaseNtaliyane, equka i-oregano, i-basil kunye neyolungileyo. Ukudibanisa imifuno eyomileyo, i-garlic kunye neoli yeoli iyanceda ukuba le sauce ibe yinto enqwenelekayo kunye nephunga elifanelekileyo, esifaneleka nayiphi na isidlo saseTaliyane: i-pasta, i-pizza, i-lasagna.
Utamatisi unamathisela 150g
Ijusi yetamatato 350 ml
Umxube weelwimi zaseTaliyane 2 tsp.
Ulwandle lutyuwa 3 g
Ishukela 2 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela i-sauce uya kuyidinga: i-25% ye-tomato unamathela, okanye enye imbiza ye-paste egxile, i-tomato juice kunye ne-pulp, ioli yeoli, i-garlic, umxube weetrobhi zase-Itali, ityuwa kunye noshukela.
Isinyathelo 2 Dalela intato yamatamatisi kunye nejusi kwisikhwama uze ubeke umlilo omncinci. Ukuba usebenzisa i-tomate yokunamathisela ngaphezulu, khulisa inani lejusi ukwenzela ukuba ndawonye 500 ml.
Inyathelo lesi-3 Dweba ngokukhawuleza igalikhi ngesandla.
Inyathelo 4 Xa umxube wekotato ubilisa, uthele kwiipunipo ze-2 zeoli yeoli, vuthela kwaye ubilise imizuzu emi-2.
Inyathelo lesi-5 Yongeza ityuwa, iswekile, i-garlic kunye nemifuno eyomileyo. Ukupheka uvuselela imizuzu emithathu.
Inyathelo 6 Ipholile kwindawo yokushisa lokushisa kwaye unokuyongeza kwisitya okanye usebenze ngokwahlukileyo kwisikhumba.
I-pepper ehamba ngexesha lokubusika
I-Sauce yaseTsatsiki (iTzatziki)
Amaqabunga ama-Eggplants kunye neTatates
Inyaniso yonke malunga nokuphuhliswa kwexesha elide labantwana
Indlela yokwakha ubomi besondo emva kokubeletha
Ukukhathazeka kwamehlo engozini kumntwana
Iingcebiso zokulondoloza ubomi bemihla ngemihla
Isiqhelo seshukela legazi kubafazi
Ngubani owenza intsebenziswano kwi-Intanethi, ekuDityananeni noThuseleko loKhuseleko
Ingumntwana onzima, okanye njani Ukuhlangabezana nexesha lokuguquka?
Ukukhetha iipilisi eziphambili zokukhusela: ukuphononongwa
Isaladi yee-peet peas, iitamatisi kunye ne-karoti
Yisiphi i-sauna esitshisa amafutha ngakumbi
Indlela yokuwa ngothando nomfana: 10 iindlela ezilungileyo
Uvavanyo lokuphuhliswa komntwana oneminyaka elilodwa
Iholide yentsapho kunye neentsana